Tokony ho tanteraka tahaka an’i Kristy isika
"Ary rehefa natao tanteraka Izy, dia tonga loharanon'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka Azy" - Heb. 5:9.
Ny Mpamonjintsika dia nandray ny maha-olombelona rehetra teo amin'ny maha-Zanak'Andriamanitra Azy. Zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra isika. Mba hahalalana ny tokony ho fitondran-tenantsika amim-pitandremana tsara, dia tsy maintsy manaraka ny lalana izay itarihan'i Kristy antsika isika. Tanteraka Izy teo amin'ny fiainany, nandritra ireo telopolo taona naha-teto an-tany Azy ary nahatratra ny fetra ambony indrindran'ny fahafenoana. — Lt 69, 1897.
Ny asantsika dia ny mitolona mafy hahatratra eo amin'ny zavatra rehetra ataontsika ny fahatanterahana izay tratran'i Kristy teo amin'ny lafin-toetrany rehetra fony Izy niaina tety an-tany. — MMin 253.
Mba handrosoana hatrany ka tsy ho tafintohina dia tsy maintsy matoky isika fa hisy tanana mahery hanarina antsika, ary fangorahana tsy hita fetra hanohana antsika raha lavo isika. Andriamanitra irery ihany no afaka mandre amin'ny fotoana rehetra ny antsoantsontsika rehefa mila fanampiana isika.
Mampalahelo ny mieritreritra fa ny tsy fiambenantsika ny anankiray monja amin'ny vavahadin-tsaintsika, ny tsy fanatanterahana fanapahan-kevitra mahasoa anankiray, ary ny fahatongavan'ny fahazaran-dratsy iray eo amintsika, dia mety hahatonga fahavoazana eo amintsika. Tsy isika ihany anefa no voa fa ireo efa nametraka ny fitokiany tamintsika koa. Ny hany fiarovana ho antsika, dia ny fanarahana izay alehan'ny Tompo, ny matoky tanteraka ny fiarovan'Ilay nilaza hoe: "Manaraha Ahy". Izao no tokony ho vavaka ataontsika tsy tapaka: "Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro." — ST, 28 Jolay 1881.
Ny fahaizana rehetra efa nomen'ny Mpahary antsika, dia tokony hokolokoloina ho amin'ny fahatanterahana fara tampony mba hahazoantsika manao asa tsara sy betsaka indrindra araka izay tratrantsika. Mba hahadio sy hahatsara ny toetsika, dia mila ny fahasoavana avy amin'i Kristy isika, ka izany no hahazoantsika mahita sy manitsy ny fahalementsika ary vao mainka hanatsara izay efa tsara dia tsara eo amin'ny toetsika aza. — PHJ, Aprily 1890.
Tsy misy tsiny ny Zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy mikendry izany fahatanterahana izany isika ka handresy tahaka Azy raha irintsika ny hanana toerana avy eo an-tanany havanana. TFC 3:336.